Cursed Ship သည် Mac App Store တွင်အချိန်အတန်ကြာအခမဲ့ဖြစ်သည် ငါက Mac ပါ
ကျိန်အပ်သောသင်္ဘော၊ စုဆောင်းသူ၏ထုတ်ဝေမှု (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်
'ကျိန်ထားသောသင်္ဘော၊ စုဆောင်းသူများ၏ပုံနှိပ်ခြင်း (အပြည့်)'ဟုတ်တယ် လုံးဝအခမဲ့ Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ ဒီဂိမ်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် 6,99 €ဒါကြောင့်အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းဟာအပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာတင်ပါတယ် 'Ondine'ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ဘယ်သောအခါမျှထပ်မံတွေ့ဆုံခြင်းမရှိသေးသောကမ္ဘာပေါ်တွင်ဇိမ်ခံကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ 'Trident ကော်ပိုရေးရှင်း' အဲဒါကိုရှာတွေ့ပြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့သင့်အားစိန်ခေါ်သည် နက်နဲသောအရာ။ သင်တွေ့ရှိသောအခါ၊ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပျက်သမျှသည်အပြိုင်ကမ္ဘာနှစ်ခု၌ဖြစ်ပျက်သည်။ အဆိုပါဂိမ်းအားလုံးဂိမ်းများနှင့်တူညီသောဒိုင်းနမစ်ရှိပါတယ် G5 ဖျော်ဖြေမှု, ပဟေmanyိများစွာနှင့်ပျော်စရာများစွာရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ဂိမ်းလုံးဝ၌တည်ရှိ၏ español.
ဂိမ်းထဲမှာမင်းဟာကမ္ဘာကြီးထဲမှာမင်းရှိနေတာပဲ ဒါတကယ်ဟုတ်ရဲ့လား၊။ သူတို့ဟာတကယ့်လူလား၊ 'Cursed Ship, Collector's Edition (Full)' တွင်၊ ဤကြီးမားလှသောသင်္ဘော၏ကုန်းပတ်အားလုံးကိုသင်ရှာရမည်။ သဲလွန်စများကိုရှာဖွေ, ပဟေlesိနှင့် mini- ဂိမ်းများကိုဖြေရှင်း.
စူးစမ်းဖို့မယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းများ 66 ။
ပြီးစီးရန်မစ်ရှင်ပေါင်း 100 ကျော်။
နှစ်ခုဂိမ်း Modes သာ: ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ပုံမှန်။
တင်ပါတယ်: 09/10/2014 ။
ဘာသာစကား: စပိန်ဂျာမန်၊ တရုတ်၊ ကိုးရီးယား၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊
ရောင်းချသူ: G5 ဖျော်ဖြေရေး AB ။
compatibility: OS X 10.7.4 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျသည်။
လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ 'ကျိန်ထားသောသင်္ဘော၊ စုဆောင်းသူများ၏ပုံနှိပ်ခြင်း (အပြည့်)' အောက်ပါတိုက်ရိုက် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Mac App Store မှ။ ငါသည်သင်တို့ကိုဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » ကျိန်အပ်သောသင်္ဘော၊ စုဆောင်းသူ၏ထုတ်ဝေမှု (အပြည့်)၊ ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်
Vine သည် Apple Watch သို့ရောက်ရှိလာပြီး featured နှင့်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုများပြသသည်
CarPlay သည် Volkswagen တွင်အလုပ်လုပ်သည်